Semenya `` vonona hiady amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana '' - teles relay
Semenya "vonona hiady amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana"
Ny mpisolovava an'ny atleta afrikanina tatsimo Caster Semeny dia nilaza fa "vonona hiady" taorian'ny fahaverezan'ny fampiakarana raharaha tany Suisse tamin'ny volana lasa teo momba ny fameperana ny tahan'ny testosterone eo amin'ireo vehivavy mpihazakazaka, hoy ny tatitry ny masoivoho. Gazety AFP.
Tsy avela hifaninana amin'ny hetsika eo anelanelan'ny 400m sy iray kilaometatra i Semenya raha tsy mihinana fanafody mampihena ny testosterone, taorian'ny fanovana fitsipika tamin'ny taona 2019 nataon'ny filan-kevi-pitantanan'ny World Athletics.
Nilaza tamin'ny AFP ny mpisolovava Gregory Nott fa vonona ny ho any amin'ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona ilay mpihazakazaka mba hanoherana ny fandrarana. Mety maharitra volana vitsivitsy ity dingana ity, hoy ihany izy.
Ny filan-kevi-pitantanana atletika dia nametraka fitsipika fa ny atleta manana Fahasamihafana eo amin'ny fampandrosoana ara-nofo (DSD) toa an'i Semenya dia tsy maintsy mihinana fanafody hifaninana amin'ny hetsika hazakazaka 400m-kilaometatra na hanova ny halaviran'izy ireo.
Ireo atleta manana DSD dia manana testosterone voajanahary avo lenta kokoa, izay nolazain'ny World Athletics fa manome azy ireo fifaninanana.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452
Semenya `` vonona hiady amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ''
bryanekobe 1569 Lahatsoratra 0 hevitra
PSG-OM: "Atolotray ho an'ireo mpanohana anay ity fandresena ity" (Mandanda) - Video
"DESSERT" - Dawin ft Silento Dance - Sidnei Santucci Choreography (@OfficialDarwin) Hip Hop Class - Video